शीर्ष १० सर्वश्रेष्ठ एनिमे वाइफस - क्र्याडल दृश्य
by एल्क चाइपाताना XNUM X जुलाई जुलाई 22 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ एनिमे Waifus मा
हामी सबै एनिमेलाई माया गर्छौं र एनिममा, केहि क्यारेक्टरहरू विभिन्न कारणहरूले गर्दा अरू भन्दा माथि उत्कृष्ट हुन्छन्। एक Waifu लाई एक काल्पनिक चरित्रको रूपमा परिभाषित गरिएको छ जसको लागि दर्शक वा प्रशंसकले विशेष स्नेहको स्थान राख्छ। उनिहरुको माया र स्नेह को कारण भए पनि उनिहरु लाई धेरै प्यारो लाग्ने पात्र, लाजमर्दो वा नचाहिने कारण भनौं । त्यसैले थप हिचकिचाहट बिना क्र्याडल दृश्यको सामान्य रायमा शीर्ष १० सर्वश्रेष्ठ एनिमे वाइफसमा प्रवेश गरौं।
10. अमागी ब्रिलियन्ट पार्कबाट इसुजु सेन्टो
केही मानिसहरूले यसलाई अपमानको रूपमा देख्नेछन् कि उनी यस सूचीको शीर्षमा छिन् तर कृपया हामीलाई सुन्नुहोस्। इसुजु अमागी ब्रिलियन्ट पार्कका धेरै एपिसोडहरूमा आफ्नो फिजिक र आभाका लागि ध्यान दिएकी छिन् र यसै कारणले गर्दा उनी उत्कृष्ट एनिमे वाइफु मानिन्छिन्। यद्यपि, एनिममा उनको चरित्र अत्यन्त बोरिंग र सुस्त थियो, केवल उनको चरित्रको कागज-पातलो पक्षहरू छन् जुन हामीले सहानुभूति गर्न प्रयोग गर्न सक्छौं। साथै उनी सामान्यतया डरलाग्दो थिइन् कि उनको क्यारेक्टरलाई लेखक सहित एनिमका केही दर्शकहरूका लागि हेर्न अविश्वसनीय रूपमा गाह्रो बनाएको थियो। Dima, जसले एक लेखे लेख समीक्षा गर्नुहोस् जुन २०२० मा अमागी ब्रिलियन्ट पार्कको बारेमा, जुन तपाईंले पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ
9. हाईस्कूल अफ द डेडबाट सेको बुसुजिमा
यो एनिमे वाइफु सूची हाईस्कूल अफ द डेड श्रृंखलाको क्यारेक्टर बिना पूरा हुने थिएन, त्यो हास्यास्पद हुनेछ! हाम्रो सूचीमा9मा आउँदैछ Saeko Busujima, भयंकर हाई स्कूलको विद्यार्थी र कटाना-विल्डिंग, जोम्बी-किलिंग, जीवन बचाउने सुन्दरी जसले अर्को एनिमे वाइफु, शिजुका मारिकावाको जीवन बचाउँदा पहिलो एपिसोडमा देखा पर्दछ। त्यो शृङ्खलाका सबै Waifus तातो छन्, तथापि, बुसुजिमा समूहको सबैभन्दा परिष्कृत, सम्मानजनक [एक हदसम्म], आकर्षक र तार्किक हो, र पक्कै पनि अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा कमी छैन। लिनुहोस् यो सूचीमा बुसुजिमाको उपस्थिति आउनु राम्रो कुराको संकेत हो।
8. Ikki Tousen बाट Hakufu Sonsaku
तपाईंहरू मध्ये केही पाठकहरू इक्की टुसेन र हाकाफुसँग परिचित नहुन सक्छन् तर छोटोमा, एनिमे एउटा सहरको बारेमा हो जुन प्रमुख लडाइँ एकेडेमीहरूको समूहमा विभाजित छ जुन सबैले नम्बर 1 हुन प्रतिस्पर्धा गर्छन्। कथा पक्कै पनि हाम्रो मुख्य पात्र हाकाफुलाई पछ्याउँछ। जसलाई हामीले पहिलो एपिसोडमा देख्छौं। हामी पक्का छौं कि तपाईंले शृङ्खला हेर्नुभयो भने तपाईंले उहाँ किन राम्रो एनिमे वाइफु हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउनुहुनेछ।
हाकाफु शेडमा सबैभन्दा तेज औजार होइन तर उनको लड्ने क्षमताहरू अविश्वसनीय छन् भनौं। यदि तपाइँसँग यो शृङ्खला हेर्ने मौका छ भने हामी तपाइँलाई सुझाव दिन्छौं। यो उत्कृष्ट घडी हो र त्यहाँ फ्यान सेवा कार्यको भार छ, विशेष गरी मुख्य पात्रहरूबाट। Hakafu फरक छैन, उनी धेरै सुन्दर छिन् र एक अद्भुत शरीर छ। उनको निर्दोष स्वभावले पनि उनलाई धेरै आकर्षक बनाउँछ किनकि उनी सामान्यतया मानिसहरूमा सबैभन्दा राम्रो देख्छिन् जब उनीहरूले उसलाई मार्ने क्रममा छन्!
7. डोन्ट बुली मी मिस नागाटोरोबाट राष्ट्रपति
डोन्ट बुली मी मिस नागाटोरोको राष्ट्रपतिले पक्कै पनि मेरो आँखा समात्यो र हामीले उनलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुक, साथै टिकटकमा देख्यौं। तर के यो राम्रो कारणको लागि हो? डोन्ट बुली मी मिस नागाटोरोमा राष्ट्रपतिको स्क्रिन टाइम न्यूनतम छ र उनको संवादले पनि खासै ध्यान दिएको छैन। प्रसङ्ग जहाँ उनी कलाको फ्रेम गरिएको टुक्रामा चित्रित भएदेखि, यो राम्ररी थाहा छ कि राष्ट्रपति राम्ररी मनपर्ने Waifu हुनुहुन्छ।
सेनपाइले आफ्नो चित्रमा चित्रण गर्ने दृश्यमा जस्तै उनी सबैलाई हेर्ने पात्र हुन्। हामी सबैलाई त्यो दृश्य याद छ। बिन्दु यो हो कि यदि तपाईंले यो एनिम देख्नुभयो भने तपाईंले पक्कै पनि श्रृंखलाबाट राष्ट्रपतिलाई सम्झनुहुनेछ, त्यो निश्चित छ।
6. हेनसुकीबाट सायुकी तोकिहारा
अब यदि तपाईंले हेन्सुकीलाई अन्त्यसम्म हेर्नुभएको छ भने, तपाईं पक्कै पनि ठूलो हृदयका साथ आँखा चिम्ने विद्यार्थी सायुकीसँग परिचित हुनुहुनेछ। अघिल्लो एपिसोडहरू मध्ये एकमा, हामी सायुकीले केकीलाई स्वीकार गरेको देख्छौं कि उनी एक "कट्टर मासोचिस्ट विकृत" हुन् जो आफ्नो गोप्य कल्पना पूरा गर्ने आशामा आफ्नो "मालिक" द्वारा हावी हुन चाहन्छिन्। सायुकी एक एनिमे वाइफु मात्र होइन, यद्यपि उनी शृङ्खलाको पूर्ण-समय प्रायोजक हुन्, उनी बिना, हेनसुकी अहिले जत्तिकै लोकप्रिय हुनेछ?
Sayuki को एक नरम आवाज, एक मनपर्ने चरित्र, र एक उत्कृष्ट बस्ट छ जुन सबैले यो मा उनको स्थानलाई अझ न्यायोचित बनाउँछ। यदि तपाईंले HenSuki हेर्नको लागि समय फेला पार्नुभयो भने, यदि तपाईं सही ठाउँहरूमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने, यो व्यस्त सौन्दर्यले निश्चित रूपमा तपाईंलाई मुस्कान दिनेछ!
5. हाईस्कूल DXD बाट Rias Gremory
उनको वर्णन गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्, ग्रेमोरी क्लानको एक शैतान, एक धुम्रपान हट बेब, एक मायालु हेरचाह गर्ने पक्ष भएको भयंकर लडाइँ विरोधी। त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् कि उनी एक महान Waifu र निश्चित रूपमा एनिमेका प्रशंसकहरूद्वारा धेरै मनपर्ने Waifu हुन्।
रियास सुन्दर रातो कपाल, नरम शान्त आवाज, अचम्मको रूपमा लेखिएको चरित्र, र चौतर्फी उत्कृष्ट प्रदर्शनले उनलाई यो सूचीमा योग्य प्रतियोगी र एनिमे वाइफु वर्ल्डमा गणना गर्नको लागि गम्भीर शक्ति बनाउँछ।
4. हाइराइज आक्रमणबाट युरी होन्जो
एउटी हाईस्कूल केटी लिनुहोस्, उसलाई एउटा पिस्तौल दिनुहोस्, उसलाई अज्ञात मास्क लगाएका शत्रुहरूले भरिएको एरेनामा राख्नुहोस् त्यसपछि आराम गरेर बस्नुहोस् र शुद्धीकरण सुरु गर्नुहोस्!
युरी होन्जो एकदमै भर्खरको एनिमे वाइफु हो हाइराइज आक्रमण फेब्रुअरी २०२१ मा मात्र बाहिर आउँदैछ। हाम्रा लेखक दिमाले वार्तामा एउटा लेख लेखे हाइराइज इनभेसनको सिजन २ जुन तपाईं पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ। जे भए पनि, यदि तपाईंले हेर्नुभयो भने हाइराइज आक्रमण त्यसोभए तपाई पक्कै पनि यो हाईस्कूल हटसटसँग परिचित हुनुहुनेछ। त्यहाँ। धेरै प्रशंसक सेवा-प्रकार दृश्यहरू छन् उच्च आक्रमण र यदि तपाईले खोजिरहनु भएको छ भने तपाई निराश हुनुहुने छैन।
यूरी पहिलो एपिसोडमा उनको उपस्थिति बनाउँछ र त्यहाँबाट हामीले उनको बारेमा के हो भनेर बुझ्छौं। उनीसँग एक सुन्दर व्यक्तित्व र अन्य धेरै उल्लेखनीय विशेषताहरू छन् जसले उनलाई अलग बनाउँछ।
3. Quintessential Quintuplets बाट Nino Nakano
धेरै फ्यानहरूले माया गर्छन् Quintessential Quintuplets र यो किन हेर्न सजिलो छ। त्यहाँ5सम्भावित Waifus छन् जुन तपाईं टोपीको ड्रपमा यो शो भित्र प्रेममा पर्न सक्नुहुन्छ, तर कुन उत्तम हो? CV को विचारमा, हामी विश्वास गर्छौं कि यो निनो हो। यो निनोको Tsundere कार्यहरू हुन् जसले उनलाई यस सूचीमा मनपर्ने एनिमे वाइफु बनाउँछ, किनकि उनी मुख्य पात्र फ्युटोरोसँग न्यानो हुन्छिन्।
तपाईं किन सोध्न सक्नुहुन्छ? ठीक छ, यो निनोको चरित्रसँग सम्बन्धित छ, अझ महत्त्वपूर्ण कुरा उनी कहाँबाट सुरु गर्छिन्। निनो एक Tsundere क्यारेक्टरको रूपमा सुरु हुन्छ तर चाँडै मुख्य पात्र Futaro मा न्यानो हुन्छ। उनको सुरुआती चिसो व्यक्तित्व र उनको अद्भुत शरीरले उनलाई यो सूचीमा एक उल्लेखनीय वाइफु बनाउँछ। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं सहमत हुनुहुन्छ। यदि तपाइँ Quintessential Quintuplets को सिजन2मा रुचि राख्नुहुन्छ भने कृपया क्लिक गर्नुहोस् यहाँ.
2. Hitagi मोनोगतारी शृङ्खलाबाट सेन्जौघर
शीर्ष 10 एनिमे Waifus
वर्णन गर्न धेरै तरिकाहरू छन् सेन्जुगहरा – बलियो, निडर, दयालु र कडा कुरा अहिले दिमागमा आएको थियो तर उनको चरित्र धेरै कारणले मन पराइएको छ। यो उनको रूप देखि भन्दा उनको स्वभाव संग धेरै गर्न को लागी छ। यो किनभने एकातिर उनी धेरै चिसो स्वभावको छिन् र कहिलेकाहीं धेरै डरलाग्दो देखिन सक्छ, तर अर्कोतर्फ, त्यहाँ समयहरू छन् जहाँ उनी धेरै आश्वस्त र दयालु हुन सक्छिन्, नम्र र संयम भएर पनि जब यो उनलाई उपयुक्त हुँदैन। यस्तो हुन। जे होस्, उनी अझै पनि उत्कृष्ट एनिमे वाइफस मध्ये एक हुन्, यसमा कुनै शंका छैन।
त्यसोभए उनी किन यस्तो छिन्? र यस सूचीमा अन्य क्यारेक्टरहरूबाट उनलाई के फरक छ? खैर, यो उनको आभा र उनको आचरण हो। उनको लामो बैजनी कपाल जुन उनले शृङ्खला मार्फत परिवर्तन गरिन् त्यो अर्को विशेषता हो जुन उल्लेखनीय छ, र यसले उनको चरित्रको अद्वितीय प्रकृतिलाई थप्छ, जसले उनलाई यो सूचीको शीर्ष दावेदार बनाउँछ।
1. मेरो पहिलो प्रेमिका बाट युकाना याम एक केटी हो
एक शक बिना, युकाना यो सबै छ, आकर्षण, दया, समानुभूति, र एक अचम्मको शरीर साथै यसलाई माथि उठाउनको लागि! उनी एनिमे वाइफुको रूपमा यस सूचीमा गम्भीर रूपमा उत्कृष्ट छिन् र उनी नम्बर 1 नभए पनि उत्कृष्ट दावेदार हुनेछिन्। युकाना पहिलो एपिसोड १ मा उनको उपस्थिति हुन्छ Hajimete no Gal जब उनलाई मुख्य पात्र जुनिचीले सोध्यो।
तपाईको अडान जे भए पनि युकाना हो, तपाईं झूट भन्न सक्नुहुन्न उनीसँग सबै क्षेत्रहरूमा विशेषता छ र यस कारणका लागि, उनी धेरै व्यक्तिहरूको सूचीको शीर्षमा छिन् र यो एकमा छ।
पढ्नु भएकोमा धन्यवाद। दिन शुभ होस्। कृपया क्र्याडल भ्यूका साइट सिर्जनाकर्ता र लेखकहरूलाई सहयोग गर्नका लागि केही आधिकारिक क्र्याडल भ्यू व्यापारिक सामानहरू खरिद गर्ने विचार गर्नुहोस्।
प्रकाशित एल्क चाइपाताना
एल्क चाइपाताना द्वारा सबै पोष्टहरू हेर्नुहोस्
अघिल्लो प्रविष्टि जुलाई २०२१ का शीर्ष १० सर्वश्रेष्ठ नि:शुल्क स्ट्रिमिङ साइटहरू
अर्को प्रविष्टि भाडा-ए-गर्लफ्रेन्ड सिजन २ प्रिमियर मिति + अन्त्यको व्याख्या गरियो